Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 4)
Samsung waxay ufureysaa barnaamijka beta-ka One UI 3.0 oo leh Android 11 ilaa Galaxy S20
Toddobo waddan ayaa isu diyaarinaya inay helaan beta-ka Android 11 ee One UI 3.0 ee Galaxy S20.
Pixel 2 wuxuu joojin doonaa helitaanka cusbooneysiinta bisha Diseembar
Kadib helitaanka Android 11, Pixel 2 wuxuu heli doonaa cusbooneysiintii ugu dambeysay Diseembar 2020.
Poco C3 waa taleefan cusub oo shirkaddu ay awoodi karto Helio G35 iyo MIUI 12
Poco C3 waxaa soo bandhigay Pocophone kadib xanta badan. Telefoon aan qaali ahayn oo aan soo bandhigno dhammaan faahfaahintiisa.
Kaamirada Galaxy Note 20 Ultra 5G waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan maanta [Dib u eegis]
DxOMark waxay qaadatay falanqaynta kamarada Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ogow sida ugu wanaagsan ee calanku u shaqeeyay.
Galaxy Z Fold2 waxaa lagu sameeyaa tijaabooyin adag oo adkeysi iyo adkeysi leh [Muuqaal]
Galaxy Z Fold2, oo ah taleefanka gacanta ee ugu horumarsan Samsung, ayaa lagu sameeyay tijaabooyin adag oo ku saabsan xoog iyo adkaysi.
Google waxay ku darsataa taageerada barnaamijkeeda ARCore 26 qalab cusub
Google waxay cusbooneysiisay tirada aaladaha la jaan qaadi kara barxada dhabta ah ee 'ARCore', iyadoo lagu daray 26 nooc oo cusub.
Sida loo cabbiro FPS ee ciyaar kasta oo taleefankaaga Xiaomi ah
Si aad u cabirto FPS ee taleefankaaga Xiaomi waxaad ku sameyn kartaa taleefanka, waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo casharkaan.
Lenovo Legion Phone Duel wuxuu ku gaaraa suuqa Yurub 16 GB oo RAM ah
Lenovo ayaa ugu dambayntii suuqa Yurub ka hirgalisay Legion Telefoonka cusub ee loo yaqaan 'Legion Phone Duel' iyadoo lagu qiimeeyay qiimo dhan 999 euro. Baro taas!
Taxanaha 'Oppo's Reno4' ayaa ugu dambeyntii laga bilaabay Yurub, iyo hadiyado bilaash ah!
Taxanaha 'Reno4' ee 'Oppo' ayaa ugu dambeyn lagu sii daayay Yurub. Raadi hadiyadaha mobilada lagu bixiyo.
Sony Wena 3: Kooxda casriga ah ee cusub oo leh ismaamul hal toddobaad ah iyo taageerada Alexa
Sony Wena 3 ayay Jabbaanku ku dhawaaqday inay tahay koox caqli badan oo soo jiidasho leh. Ogow dhammaan faahfaahinta qalabkan cusub.
Wax walba oo aan ka ognahay illaa iyo hadda 200 euro ee soo socda ee OnePlus Nord iyo waxa aan filan karno
Waxaan si faahfaahsan u faahfaahin doonnaa dhammaan daadinta iyo xanta ku saabsan asalka ku saabsan moobiilka xiga ee OnePlus, kaas oo dhowaan imaan doona Nord cusub.
Gboard loogu talagalay TV-ga Android gabi ahaanba waa la naqshadeeyay
Gboard ayaa loo cusbooneysiiyey TV-ga Android-ka wuxuuna dhowaan soo galayaa telefishinada nidaamka qalliinka ku shaqeeya. Waxaan kuu sheegeynaa warka.
Wax cusub oo ka imanaya gaar ahaanshaha lahaanshaha Pixel-ka Google Duo illaa sanadkii hore Android.
Hadda waad soo dejisan kartaa waraaqaha cusub ee aan ka helayno Pixel 5 cusub ee Google soo bandhigtay isaga iyo Pixel 4a 5G.
The OnePlus 7 iyo Nord waxay soo dhaweynayaan cusbooneysiin cusub oo software ah oo lagu daro balastarka amniga ee ugu dambeeyay.
Google Pixel 5 iyo Pixel 4a 5G waa rasmi: Waxay ku yimaadeen Snapdragon 765G iyo Android 11
Google wuxuu ku dhawaaqayaa Pixel 5 iyo Pixel 4a 5G cusub, oo ah laba meel dhexe oo cusub oo leh qiime aad muhiim u ah. Ogow wax walba oo iyaga ku saabsan.
Xiaomi Mi 10T Lite waa rasmi: qaabeynta, astaamaha iyo qiimaha
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta cusub ee Xiaomi Mi 10T Lite, oo ah taleefan dhexdhexaad ah oo lala yaabo shaashadda iyo kamaradda.
Xiaomi Mi 10T iyo Xiaomi Mi 10T Pro waxaa lagu shaaciyey 144 Hz iyo 64 iyo 108 kamaradaha MP
Xiaomi waxay ku dhawaaqday Mi 10T iyo Mi 10T Pro, oo ah laba telefoon oo heer sare ah oo cusub oo leh astaamo badan oo cusub. Halkan ka raadi wax walba oo iyaga ku saabsan.
Telefoonada gacanta ee waayeelka
Helitaanka taleefan qof waayeel ah oo aad ku qanciso inuu adeegsado waa hawl aad u fudud adoo raacaya talooyinkaan.
Chromecast cusub oo wata TV-ga Android gabi ahaanba waa la sifeeyey
Kani waa Google Chromecast cusub, oo ah dongle kaas oo la yimaada kontoroolka fog iyo Android TV oo ah nidaamka hawlgalka.
Samsung Galaxy M21 waxay heleysaa cusbooneysiin One UI Core 2.1 ah oo la socda balastarka amniga Sebtember
Samsung's Galaxy M21 ugu dambeynti wuxuu helaa cusbooneysiinta One UI Core 2.1 oo la socda casriyeyntii ugu dambeysay ee amniga Android.
Motorola Edge + waa ikhtiyaar wanaagsan oo ku saabsan soo saarista codka iyada oo ay ugu mahadcelinayaan kuwa ku hadla codka maqalka [Dib u eegis]
DxOMark waxay tijaabisay Motorola Edge + si loo ogaado sida ay ugufiican tahay qeybaha codka iyo duubista.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha Pixel 4 waxay la kulmaan xirmooyin kedis ah iyo daadinta batteriga dhaqsaha badan
Dhibaatada ugu dambeysa ee saameysa aaladaha Pixel range waxay diirada saareysaa Pixel 4 waxayna saameyneysaa, mar labaad, batteriga.
Sida loo sawiro dukumiintiyada Samsung Galaxy
Samsung Galaxy waxay u timid inay qariso qalab lagu baaro dukumiintiyada. Baro sida looga helo casharradan.
Huawei P Smart 2021 wuxuu rasmi u noqonayaa Kirin 710A chipset
Huawei P Smart 2021 ayaa loo soo saaray inuu yahay taleefan casri ah oo cusub oo la yimaada processor-ka Kirin 710A iyo shaashadda daloolka leh.
Galaxy A72 wuxuu noqonayaa Samsung kii ugu horreeyay oo wata 5 kaamiro
Dhaxal sugaha Galaxy A71, A72, ayaa suuqa ku dhufan kara ilaa 5 kamaradood oo gadaashiisa ah, isaga oo ka dhigi kara kii ugu horeeyay ee Samsung ee sameeya.
Samsung waxay hawlgelisaa ECG ee Galaxy Watch 3 iyo Watch Active 2
Waxqabadka kuu oggolaanaya inaad ku sameyso barnaamijyada korantada ee Samsung Galaxy Watch ayaa hadda laga heli karaa Watch 3 iyo Watch Active 2
LG waxay ku dhawaaqday laba taleefan oo heerkoodu sarreeyo ah: LG K62 iyo LG K52. Ogow dhammaan qeexitaannada farsamo iyo in ka badan.
Shaandheeyay astaamaha ugu horreeya ee Samsung Galaxy S21
Jaangooyooyinkii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy S21 ayaa la daadiyay, halkaas oo aan ka arki karno suurtagalnimada uu taleefankani bixin doono
OnePlus 8T wuxuu ku imaan doonaa 65 W xawaare degdeg ah iyo batteri laba-unug ah
Tikniyoolajiyadda degdegga ah ee lagu buuxiyo OnePlus 8T waxay noqon doontaa 65 W, halka batteriguna uu yeelan doono qaab-dhismeed labo-unug ah.
Samsung waxay soo saartay Galaxy S20 FE oo leh shaashad fidsan iyo Snapdragon chip oo loogu talagalay Yurub
Haddii aan raadinno sababta loo bilaabay Galaxy S20 FE, waxaan ka heli doonnaa Galaxy S10 Lite oo ahaa ...
Google Nest Hub ayaa kuu oggolaan doona inaad ku ciyaarto waxyaabaha Disney + ka kooban
Disney + iyo Google ayaa hada shaaciyay bilaabida codsi kuu ogolaanaya inaad ku raaxeysato Disney + oo ku jira Google Nest Hub
Google waxay soo saartay nooc ka mid ah Android 11 oo loogu talagalay qalabka ay maamusho Apple TV
Royole FlexPai 2 Ayaa Lagu Dhawaaqay: Qalab Cusub Oo Cusub, 5G iyo Water OS 2.0
Royole waxay ku dhawaaqday aaladda cusub ee FlexPai 2, oo ah terminal laba shaashad soo jiidasho leh. Ogow wax walba oo ku saabsan qalabkan cusub.
Samsung ayaa joojisay shirkii horumarinta ee sanadkan
Shirkadda laga leeyahay Kuuriyada Samsung ee Samsung ayaa si rasmi ah u shaacisay inay u baajisay shirkii sanadlaha ahaa ee horumarinta ee sanadkan loo yaqaan COVID-19
Oppo Reno4 SE 5G, mobilada cusub ee la imanaya Mediatek's Dimensity 720 iyo 65 W lacag deg deg ah
Oppo Reno4 SE 5G waa taleefan casri ah oo cusub oo soo bandhigaya processor-ka loo yaqaan 'Mediatek Dimensity 720 processor chipset' iyo 65W oo si xawli ah ku socda
Realme Narzo 20, Realme Narzo 20A iyo Realme Narzo 20 Pro: Saddex meel oo dhex dhexaad ah oo u taagan baytariyada.
Realme waxay ku dhawaaqday Narzo 20 cusub, Narzo 20A iyo Narzo 20 Pro, oo ah seddex taleefano dhexdhexaad ah. Halkan ka baro dhammaantood.
Samsung Galaxy S8 wuxuu helaa cusbooneysiin amni cusub
Kahor intaadan dhamayn cusboonaysiinta wareegiisa, Galaxy S8 ayaa hadda heshay cusboonaysiin amni cusub Sebtember 2020
OnePlus 5 iyo 5T waxay sugayaan cusbooneysiin weyn, laakiin tan waxaa dib u dhigay dhibaato
OnePlus 5 iyo 5T waxay sugayaan cusboonaysiin cusub. Tan dib ayaa loo dhigay cilad darteed.
Realme C17 waa rasmi: Taleefan cusub oo miisaaniyadeed leh oo leh 90 Hz screen
Realme C17 waa noocyada soo gelitaanka cusub ee shirkadda ee la soo bandhigay maanta Sebtember 21. Ogow dhammaan qeexitaannada gundhigga.
699 euro ayaa ku kici doona Galaxy S20 Fan Edition
Iyadoo labo maalmood ay ka hartay soo bandhigida rasmiga ah ee Galaxy S20, ragga ka socda WinFuture waxay fursad u heleen qiimahooda Yurub: 699 euro
Sida loo sahlo goobta ciyaarta ee EMUI 10. (Launcher Game ka Huawei iyo HONOR)
Tababar fiidiyoow ah ama talo wax ku ool ah oo loogu talagalay dadka isticmaala EMUI 10 oo aan ku sharxi doono sida loo suurtogeliyo Goobta Ciyaaraha ee EMUI 10.
OnePlus 8T ayaa imanaya, shirkadduna si rasmi ah ayey u xaqiijisay
Waxaan diyaar u nahay inaan kugu soo dhaweyno waxa noqon doona mid ka mid ah boosteejooyinka ugu fiican sanadka. Si cad, waxaan ka hadlaynaa OnePlus 8T.
Microsoft waxay sii wadaa inay balaadhiso khibrada barnaamijkaaga Taleefanka si loogu daro barnaamijyada aan ka furan karno kombuyutarkayga.
Jadwalka sii deynta beta beta ColorOS 11 waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay Oppo taleefanno badan oo casri ah.
Marka waxay ku jirtaa fiidiyowga One UI 2.5, oo ah cusbooneysiinta weyn ee ay heshay Samsung Galaxy taasina waxay keeneysaa waxyaabo ay ka mid yihiin wireless wireless.
Amazfit Band 5 ayaa lagu dhawaaqay: Kooxda casriga ah ee cusub oo leh 15 maalmood oo ismaamul ah iyo dhisme ku yaal Alexa
Amazfit Band 5 waxaa ku dhawaaqay Xiaomi inay tahay kooxda ugu muhiimsan uguna casrisan suuqa. Ogow dhammaan qeexitaankiisa.
Oppo Reno 4 Pro horeyba wuxuu uheystey taariiqda Yurub
Waa Oktoobar 1, taariikhda loo qorsheeyay in Oppo Reno 4 Pro laga heli doono iibka Yurub.
Sony Xperia 5 II ayaa lagu shaaciyey Snapdragon 865, 5G iyo kamaradaha xirfadlayaasha ah
Cusub ee Sony Xperia 5 II durba waa rasmi, ogow dhammaan faahfaahinta calanka cusub ee shirkadda Aasiya.
Dib u warshadeynta qashinka oo ka taxaddar deegaanka barnaamijyadan
Isku-darka oo aan ku taxnay qaar ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee laga heli karo Play Store si dib loogu warshadeeyo loona daryeelo deegaanka.
Hal UI 3.0 waqtiga isticmaalka batteriga tan iyo markii ugu dambeysay ee la soo celiyo (ugu dambeyn) wuu soo noqdaa
Riwaayad weyn oo ay soo saartay One UI 3.0 si ay u keento muuqaal ay si aad ah u dalbadeen dad badan oo wata batteriga.
LG Q31 waa noocyada soo gelitaanka cusub ee shirkadda ee ballan qaadaya madax-bannaanida muhiimka ah. Wax badan ka baro taleefanka.
Ku soo dejiso 'Waraaqda Live' ee OxygenOS 11 qalab kasta oo Android ah
An OxygenOS 11 wallpaper animated ah oo aan u wada isticmaali karno inaan ku raaxeysano asalka asalka ah ee Android.
Hadda waxaa laga heli karaa Spain Moto G9 Plus 269 euro
Toddobaad kadib markii si rasmi ah loo soo bandhigay, Motorola Moto G9 Plus cusub ayaa hadda laga heli karaa Spain iyadoo laga bixinayo 269 euro.
Wax kasta oo laga ogyahay Realme Narzo 20 Pro ka hor intaan la bilaabin
Waxaan si faahfaahsan u faahfaahinaynaa wax kasta oo la og yahay oo lagu xamanayay RealmeNarzo 20 Pro, oo ka mid ah moobiillada soo socda ee shirkadda.
Samsung Galaxy M31 waxay heshaa One UI Core 2.1 oo leh balastarka amniga Sebtember
Samsung ayaa sii deysay cusbooneysiinta One UI Core 2.1 ee Galaxy M31 iyadoo la adeegsanayo baakadka amniga Android ee bisha Sebtember
Sifeeyay sifooyinka Samsung Galaxy F41
Dhammaan astaamihii farsamo ee Samsung Galaxy F41, Samsung ee bartamaha-dhexe, ma loo siidaayay suuqa Hindiya?
Samsung waxay soo bandhigeysaa dareemayaal cusub 108 MP iyo afar dareemayaal kale oo kamarad ah
Samsung waxay ku dhawaaqday afar dareemayaal cusub, mid ka mid ah waa 108 MP, kuwa kale waxay u maleynayaan inay daboolayaan dhammaan baahiyaha.
Cubot Note 20 Pro oo leh kamarad gadaal ah, 6GB + 128GB ayaa ku yimaada qiimo dhimis: Hadda waa $ 99,99
Cubot Note 20 Pro waxay si aad ah hoos ugu dhigeysaa qiimaheeda qiyaastii 40 doolar. Wax walba ka baro taleefannadan casriga ah ee dhexdhexaadka ah.
Tani waa One UI 3.0 oo beta ah oo ku saabsan Galaxy S20 oo leh Android 11
In beta, One UI 3.0 ayaa horeyba looga heli karaa Galaxy S20 taasna waxay na tuseysaa isbeddelada ku dhaca dhinacyada muhiimka ah ee Android 11.
Google wuxuu soo bandhigi doonaa Pixel 30 cusub September 5
Google waxay soo bandhigi doontaa 30ka Sebtember Pixel 5 iyo Pixel 4a 5G cusub, iyo sidoo kale ku hadla caqli iyo Chromecast cusub. Raadi wax walba.
LG Wing waxaa si rasmi ah loogu sameeyay kamarad lagalaaban karo iyo labo shaashad: midkood waa la beddeli karaa
LG Wing waa taleefan casri ah oo cusub oo lagu soo saaray kamarad hore oo laga noqon karo iyo shaashad labalaab ah; mid ka mid ah kuwan waa meerto.
Vodafone iyo Disney waxay ku biiraan xooggooda: waxay bilaabi doonaan a smartwatch for Christmas
Vodafone ayaa ku dhawaaqday heshiis wadashaqeyn ah oo lala yeelanayo shirkadda Disney si loo soo bandhigo taleefanka casriga ee carruurta loogu talo galay ciida kirismaska Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta.
Waxaan ku tijaabineynaa wax soo saarka cusub ee shirkadda Huawei "smart home"
Waqtiyada COVID ee ka hortagga, wax walba waa suurtagal. Huawei wuxuu arkay inuu ku habboon yahay inuu na soo xigto dhammaan tallaabooyinka ...
Sida loo hagaajiyo shaashadda madow ee dhimashada Samsung Galaxy-kaaga
Hagaajinta shaashadda madow ee dhimashada way fududaan kartaa adigoo raacaya casharradan. Tani badanaa waa guuldarro software ah.
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa dhacdo Sebtember 23 halkaas oo ay ku soo bandhigi karto Galaxy S20 Fan Edition
Sebtember 23, Samsung waxay si rasmi ah u soo bandhigi doontaa Galaxy S20 Fan Edition cusub, nooca dhaqaalaha ee Galaxy S20.
NVIDIA waxay ku iibsataa ARM $ 40.000 bilyan
Shirkadda weyn ee laga leeyahay dalka Japan ee ARM ayaa ka iibisay shirkadda ARM shirkadda NVIDIA, oo ah shirkad Mareykan ah oo soo saare ka ah farsameeyayaasha sawir gacmeedyada 40.000 milyan oo doolar.
Telefoonada gacanta ee Huawei oo leh EMUI 11 ayaa loo cusbooneysiin doonaa HarmonyOS
Nidaamka hawlgalka ee Huawei, HarmonyOS, ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay maalmo ka hor wuxuuna ku imaan doonaa dhammaan qalabka EMUI 11
Realme 7 wuxuu helayaa cusbooneysiintiisii ​​ugu horreysay ee software: Habka 64 MP Pro iyo horumarin badan oo kamarad ah ayaa timid
Realme 7 ayaa horey kuugu soo dhaweynaysa cusbooneysiinta ugu horreysa ee softiweer. Midkani wuxuu la yimaadaa qaabka kamaradaha 64 MP Pro.
Moto E7 Plus waxaa lagu shaaciyey Snapdragon 460 iyo 5.000 mAh batari
Motorola waxay soo bandhigtay Moto E7 Plus cusub oo leh processor dhexdhexaad ah iyo nolol batari ah oo aad u dheer ilaa 2 maalmood. Wax dheeri ah baro.
Sidee looga saaraa dib u dhaca kaamerada taleefankaaga Xiaomi
Hadda waad ka saari kartaa kaameradda taleefankaaga Xiaomi casharradan fudud, haddaba raac warqadda.
Huawei Watch GT2 Pro hadda waa rasmi
Soo saaraha Aasiya ayaa hada soo bandhigay Huawei Watch GT2 Pro cusub, oo ah smartwatch bixiya ismaamul aad u fiican iyo waxyaabo kaloo badan.
The Galaxy S20 Fan Edition ayaa ka muuqda bogga Samsung ee Filibiin
Taariikhda la bilaabayo ee Galaxy S20 Fan Edition waxay umuuqataa inay ka dhowdahay intaad filan laheyd.
Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne wuxuu diiwaangeliyaa 230.000 codsi
Samsung waxay aragtaa sida diiwaanka daabacaadda Galaxy Z Fold2 Thom Browne ay uga ballaaran yihiin unugyada ay rabto inay soo bandhigto.
Apple waxay ku shaqeyneysaa taleefankeeda casriga ah ee isku laaban oo leh shaashadaha Samsung
Shirkadda ugu weyn uguna keli ah ee soo saarta shaashadaha, Samsung, ayaa u diraya Apple noocyadan shaashadda ah si ay ugu qaabeeyaan iPhone-ka isku laaban.
Moto G9 Plus ayaa la bilaabay: waxay la timid shaashad daloola, Snapdragon 730G iyo batari weyn
Motorola Moto G9 Plus hadda waa rasmi. Ogow dhammaan astaamaheeda, qeexitaannada farsamada iyo faahfaahinta qiimaha iyo helitaanka.
Huawei ugu dambeyntii wuxuu bilaabay EMUI 11 oo leh warar badan iyo horumar
Huawei waxay si rasmi ah u sii daysay nuuca cusub ee lakabaynta qaabeynta, taas oo ah EMUI 11. Waxay la timid muuqaalo badan oo cusub.
Batariga qaar ka mid ah Pixel 3 iyo Pixel 3 XL waa bararmayaa
Dhibaatada ugu dambeysa ee la xiriirta Pixel range, kiiskan oo leh jiilka 3aad, wuxuu saameeyaa batteriga, batteri bararta inkasta oo uu sii shaqeynayo
Google Pixel 4a hadda waa lagu sii hayn karaa Spain
Google Pixel 4a la filayo ayaa horeyba loogu sii hayn karaa bogga rasmiga ah ee Google, in kasta oo waqtiga dhoofintu uu qiyaastii yahay hal bil.
Telefoon leh shaashad hufan? Bartilmaameedka soo socda ee Samsung
Samsung waxay ku shaqeyn kartaa taleefan cusub oo u muuqda mid leh shaashad hufan. Galaxy S21?
Wiko wuxuu ku dhawaaqay Y81 cusub, oo ah taleefan heer-gal ah oo leh madax-bannaanid dheer. Ogow dhammaan tilmaamaha, taariikhda iyo qiimaha.
Motorola Razr 5G waa taleefan casri ah oo laallaabi karo oo horey loogu sii daayay Qualcomm's Snapdragon 765G iyo inbadan.
Taariikhda la bilaabayo qaybta hoose ee Redmi 9i ayaa ugu dambayntii si rasmi ah shirkaddu u shaacisay.
Little M2 ayaa lagu dhawaaqay: 6,53 ″ guddi, 6 GB oo RAM ah iyo MIUI 11
Poco M2 waa taleefanka cusub ee shirkadda ay awoodi karto ee khadka dhexe. Ogow dhammaan faahfaahinta casriga cusub.
Bilowga Galaxy S20 Fan Edition ayaa la filan karaa
Soo bandhigida suuqa ee Galaxy S20 Fan Edition ayaa suuqa soo gali kara todobaadyada soo socda ee ma ahan horaanta 2021 sida S10 Lite.
Galaxy S9 wuxuu helayaa cusbooneysiinta Sebtember laakiin maahan One UI 2.5
Cusbooneysiinta hal-abuurka ah ee 'One UI 2.5' ee loogu talagalay Galaxy S9 laguma heli karo cusboonaysiinta amniga ee ugu dambaysay qalabkani helay.
10-ka casriga ah ee ugu waxqabadka fiican Ogosto 2020
Halbeegga AnTuTu wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10ka taleefannada casriga ah ee ugu waxqabadka wanaagsan Ogosto 2020. Waxaan halkaan kugu tuseynaa!
LG waxay xaqiijineysaa "Wing" inay tahay magaca taleefankeeda shaashadda leh ee laba-geesoodka ah
Telefoon aad u qaas ah oo la yiraahdo Wing iyo in LG uu keeni doono Sebtember 14 si uu noo tuso dhammaan faahfaahinta.
Sida looga hortago wareegga shaashadda ee Android
Haddii aad rabto in taleefankaaga casriga ahi uu joojiyo wareejinta shaashadda si otomaatig ah markasta oo aad rogto, qormadan waxaan ku tusaynaa sida aad uga fogaan karto.
Pocophone X3 NFC waa rasmi: Snapdragon 732G, LiquidCool iyo 33W baytari si dhakhso leh u shaqeeya
Pocophone X3 durba waa rasmi, taleefanka cusub wuxuu la yimid muuqaalo aad muhiim u ah. Waxbadan ka baro taleefanka casriga ah halkan
Realme 7i oo leh Snapdragon 662 ayaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 17
Realme 7i waxaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 17, in kasta oo qeexitaankiisa oo dhan la shaaciyey ka hor inta uusan rasmi noqon.
Huawei Y9a, moobilka cusub ayaa horey loogu sii daayay 64 MP kaamirada afar geesoodka ah iyo 40 W oo si xawli ah ku socota
Huawei Y9a waa taleefan cusub oo suuqa laga soo saaray iyadoo la adeegsanayo processor Mediatek Helio G80 iyo kamarad hore oo soo baxda.
Galaxy Watch Active 2 wuxuu heli doonaa isla shaqooyinka Galaxy Watch 3
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in Galaxy Watch Active 2 uu heli doono qayb weyn oo ka mid ah wararka softiweer ee laga heli karo dhawaanta la bilaabay Galaxy Watch 3
Kaamirada Oppo Reno 4 Pro waxay wanaajineysaa mahad celin cusub
Oppo Reno 4 Pro wuxuu soo dhaweynayaa cusbooneysiin cusub oo software ah oo hagaajinaya kaamirooyinka.
Pixel 5 iyo Pixel 4a 5G: qiimaha iyo taariikhda la siidaayo
Sida laga soo xigtay Vodafone Germany, Pixel 4a 5G iyo Pixel 5 labaduba waxay ku dhufan doonaan suuqa Sebtember 22.
Caddaymaha Galaxy S20 Fan Edition ayaa xaday
Laga soo bilaabo WinFuture waxay ka faafiyeen dhammaan qeexitaannada waxa noqon doona nooca dhaqaale ee Galaxy S20, oo loo yaqaan Fan Edition
Samsung Galaxy S10 Lite Ugu dambeyntii waxay heshaa hal cusbooneysiin ah UI 2.5
Ugu dambeyn Samsung Galaxy S10 Lite wuxuu helaa One UI 2.5. La soco waxa ku soo kordha cusbooneysiintan muhiimka ah.
Qiimo jaban 200 Euro OnePlus oo lagu arkay Geekbench
OnePlus waxay umuuqataa inay diyaar u tahay inay soosaarto moobilkeeda hoose ee qiimihiisu gaarayo 200 oo euro. Midkani wuxuu ka muuqday Geekbench.
Samsung waxay sameyn doontaa 800.000 Galazy Z Fold2 kahor dhamaadka sanadka
Inta ka hartay sanadka, shirkadda Kuuriyada Samsung waxay soo saari kartaa ilaa 800.000 Galaxy Z Fold2 si ay u soo saarto.
Galaxy S10 Lite wuxuu ka dhammaanayaa cusbooneysiinta One UI 2.5
Samsung waxay soo bandhigeysaa cusbooneysiinta ku dareysa muuqaalka 'One UI 2.5' ee Galaxy S10, laakiin maaha mid loogu talagalay Galaxy S10 Lite.
Huawei Enjoy 20 iyo Huawei Enjoy 20 Plus: 5G Telefoon raqiis ah iyo Soo Celinta Kaamirada Mootada
Huawei Enjoy 20 iyo Huawei Enjoy 20 Plus ayaa ah aaladaha cusub ee 5G ee shirkadda qaali ka tahay. Ogow wax walba oo iyaga ku saabsan.
Ka faa'iideyso: Realme X3 SuperZoom ayaa lagu iibinayaa Amazon
Ha seegin dalabkan ka yimid Amazon si aad ugu iibsato Realme X3 SuperZoom oo qiimo jaban ugu dhowaad 50 euro ah. Gorgortan!
Kani waa Samsung Galaxy Fit 2, soo saaraha cusub ee smartband
Samsung Galaxy Fit 2 horeyba waa rasmi: waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta astaamaheeda, naqshadeynta iyo qiimaha rasmiga ah.
Galaxy S10 wuxuu bilaabaa inuu helo One UI 2.5
Samsung ayaa soo saartay cusbooneysiin ku saabsan Galaxy S10 oo ay ku jiraan nooca 2.5 ee lakabka hal-abuurka One UI.
New Realme 7 iyo 7 Pro oo wata 65 W oo degdeg ah iyo 90 Hz oo shaashad ka yar 250 euro
Realme 7 iyo 7 Pro ayaa loo siidaayay sida laba taleefan oo heer dhexe ah oo leh bandhigyo ilaa 90 Hz iyo 65 W ah oo si dhakhso ah loogu soo shubo.
TomTom Go Navigation hadda waxaa laga heli karaa Huawei App Gallery
TomTom ayaa hadda ku dhawaaqay daahfurka barnaamijkiisa hagista TomTom Go Navigation ee Hauwei App Gallery
ZTE Axon 20 5G ayaa loo soo saaray inuu yahay taleefankii ugu horreeyay ee kamarad aan la soo bandhigin ah
ZTE Axon 20 5G waa taleefankii ugu horeeyey ee suuqa yaala kamarad hore shaashada hoostiisa. Wax walba ka ogow terminalkan cusub.
Qiimaha Galaxy Tab S7 oo leh 5G isku xirnaanta ayaa hadda rasmi ah
Qiimaha iibka ee Galaxy Tab S7 oo leh isku xirnaanta 5G horay ayaa loo shaaciyey. Waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta ilaa hadda la shaaciyay.
Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy A42 5G
Samsung waxay soo bandhigtay sharadkeedii ugu jabanaa ee qaabka casriga ah ee leh 5G isku xirnaanta Galaxy A42 5G
Realme X7, Realme X7 Pro iyo Realme V3 5G waxay la imaanayaan 5G chips iyo 65W xawaare dheereeya
Realme X7, Realme X7 Pro iyo Realme V3 5G ayaa si rasmi ah loo soo bandhigey, waxay ku imaanayaan Chips Dimensity, 5G iyo waxyaabo kaloo badan.
Waxaan horey u ogaanay qiimaha Samsung Galaxy Z Fold 2. Adiguna ma jeclaan doontid
Samsung waxay xaqiijisay taariikhda imaatinka iyo qiimaha rasmiga ah ee Galaxy Z Fold 2, taleefanka cusub ee isku laaban shirkadda.
Sidaa darteed OnePlus wuxuu u habeeyay OxygenOS 11 adeegsiga hal gacan ee mobilada
Loogu talagalay isticmaalka mobilada hal gacan, OnePlus wuxuu sharxayaa kormeerrada lagu sameeyay OxygenOS 11.
Lenovo Tab P11 Pro, kiniiniga cusub ee leh shaashadda 2K iyo Snapdragon 730G
Shirkadda Shiinaha ee leh Motorola, Lenovo, ayaa mar kale sameysay sarkaal cusub oo kiniin ah, kaasoo ku yimid magaca Tab P11 Pro.
Huawei Enjoy 20 iyo Huawei Enjoy 20 Plus ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Sebtember 3
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa 3da bisha Sebtember labada taleefan ee cusub ee raaxada 20 iyo raaxada 20 Plus. Ogow faahfaahinta koowaad ee labada terminaal.
Samsung Galaxy M51: qeexitaannada iyo qiimaha
Dhowr toddobaad oo xan ah kadib, Samsung waxay si rasmi ah u soo bandhigtay Samsung Galaxy M51 cusub oo qiimihiisu yahay 360 euro
Poco X3 oo u dhow koonaha qiimihiisuna wuxuu noqon doonaa mid xad dhaaf ah!
Xiaomi waxay si qalad ah u daabacday qiimaha rasmiga ah ee Poco X3, xubinta xigta ee qoyska Poco ee kaa yaabin doonta qiimaheeda hoose.
Sida loo kiciyo habka monochrome ee taleefannada Xiaomi
Baro sida loogu kiciyo habka monochromatic ee taleefankaaga Xiaomi casharkaan fudud, waxaa haboon inaad dadaalkan sameyso.
Samsung Galaxy S20 wuxuu heli doonaa Android 11 si dhakhso leh
Samsung Galaxy S20 waa mid ka mid ah taleefannada ugu wanaagsan ee aad ka iibsan karto inta u dhexeysa dhamaadka sare. Waxaan ka hadleynaa…
Naqshadda Sony Xperia 5 II ayaa la xaqiijiyay
Waxaan ku tusineynaa naqshadda Sony Xperia 5 II, oo la dusiyay si aan u aragno sida ay u egtahay calankeeda soo socota.
OnePlus wuxuu ku gali karaa meelaha hooseeya mobiil ka yar 200 euro
Waxay umuuqataa in OnePlus uu dhawaan daahfuri doono taleefan casri ah oo dhamaadka-hoose ah, mid imaan doona sida OnePlus Clover.
Huawei Watch Fit, smartwatch cusub oo raqiis ah oo horey loogu sii daayay GPS, shaashadda AMOLED iyo kormeerka garaaca wadnaha
Shirkadda Huawei ayaa soo bandhigtay daawashada cusub ee loo yaqaan 'Fit Fit', oo ah saacad casri ah oo leh shaashad tiknoolajiyad ah AMOLED oo leh AOD, GPS, kormeerka garaaca wadnaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Cusboonaysiinta amniga ee Ogosto ee Galaxy A51 hadda waa la heli karaa
Galaxy A51 horeyba waxay u heysatey cusbooneysiintii ugu dambeysay ee amni ee bisha Ogosto 2020 marka laga takhaluso
Infinix Zero 8, mobiil raqiis ah oo wata Helio G90T, shaashadda 90 Hz iyo kamarad afar gees ah
Telefoon casri ah oo cusub ayaa la furay, waana Infinix Zero 8. Moobilkani wuxuu ku yimaadaa meel dhexdhexaad ah oo badan oo la bixiyo.
BLU G90 Pro: Taleefan cusub oo leh Helio G90T, lacag-bixin deg deg ah iyo Android 10
BLU waxay ku dhawaaqday G90 Pro cusub, oo ah taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah oo leh hamiga ah inuu ku guuleysto suuqa gobolka. Ogow astaamaheeda.
OnePlus wuxuu diyaarin lahaa smartwatch, Watch OnePlus
Waxay horeyba isugu dayeen 2016, waxayna umuuqataa in hada wax walbo ay kusocdaan wadada waxa noqon lahaa OnePlus Watch, Lau's smartwatch-kii ugu horeeyay.
Fiidiyow ayaa u muuqda oo muujinaya dhammaan faahfaahinta Sony Xperia 5 II
Fiidiyow ayaa la daadiyay oo aan ku arki karno dhammaan faahfaahinta Sony Xperia 5 II: qaabeynta, astaamaha iyo waxyaabo kale oo badan
Xilli ciyaareedka cusub ee Fortnite ayaa bilaabay. Sida war xun u ah taageerayaasha shirkadda Cupertino, looma heli doono iPhones.
Realme 7 iyo Realme 7 Pro waxay xaqiijinayaan taariikhda ay soo bandhigayaan: Sebtember 3
Realme waxay horey uheshay taariikh go aan leh oo ay kusoo bandhigeyso Realme 7deeda cusub iyo Realme 7 Pro, waxay noqon doontaa todobaad un.
Vivo Y20 iyo Y20i waxay kubilaabeen baytariyada Snapdragon 460 iyo 5000 mAh
Vivo Y20 iyo Y20i waa la siidaayay oo waxaa lagu soo bandhigay processor-ka Qualcomm ee 460nm Snapdragon 11 processor chipset ah.
Asus Zenfone 7 iyo Zenfone 7 Pro: Laba Taleefanno Cusub oo Wareeg ah iyo Batariga Weyn
Asus waxay ku dhawaaqday Zenfone 7 iyo Zenfone 7 Pro cusub maanta oo ay taariikhdu tahay 26 Ogosto oo leh astaamo badan oo cusub, oo ay ku jiraan kamarada wareegaya.
Gionee Max iyo Gionee M30, waa labada taleefannada casriga ah ee cusub ee wata baytariyada waaweyn illaa 10.000 mAh
Gionee wuxuu soo saaray Max iyo M30, oo ah laba taleefan oo casri ah oo la socda baytariyada ilaa 10.000 mAh awoodna ku leh.
Dib u eegista muuqaalka cusub ee Samsung Galaxy Z Fold2
Dib-u-eegiddii ugu horreysay ee Galaxy Z Fold2 ayaa hadda la heli karaa, fiidiyow na tusaya farqiga ugu weyn ee jiilka koowaad.
Sida loo sahlo is rogrogista siman ee taleefannada Realme qaarkood
Realme waxay ku dartay ikhtiyaarka wareejinta siman ee Realme Lab gudaha lakabka Realme UI ee bixiya ciyaar aad u badan.
Samsung Galaxy Note 20 wuxuu noqon lahaa xubintii ugu dambeysay ee Qoyska Note-ka ah
Bishii Ogosto 5, shirkadda fadhigeedu yahay Seoul waxay soo bandhigtay jiilkeeda cusub ee Note, oo leh Galaxy Note ...
Oppo A53 waa taleefan casri ah oo cusub oo shirkadda Shiinaha laga hirgeliyay iyadoo loo adeegsanayo terminal shaqeynaya.
Moto G9 Play ayaa ku dhawaaqay: Snapdragon 662 iyo batari awood weyn leh
Motorola waxay si rasmi ah u shaacisay Moto G9 Play cusub oo leh SD662 iyo batari awood weyn oo weyn leh.
Galaxy S21 wuxuu ku dari karaa S Pen iyo xaddiga xusuusta ee suuqa ka baaba'aya
Galaxy Note 20 wuxuu noqon karaa qaabkii ugu dambeeyay ee Xusuusin ee suuqa ku garaaca S Pen, maadaama uu qayb ka noqon doono Galaxy S21
LG Q92, sharadka cusub ee soo saaraha Koonfurta Kuuriya ee la yimaada kan ugu fiican Snapdragon 765G
LG waxay soo saartay taleefan cusub oo casri ah oo loogu talagay bartamaha, kaas oo ku yimid LG Q92 waxaana ku shaqeeya Snapdragon 765G.
Shaashadda cagaaran mar kale ayey dhibaato ku tahay Samsung, hadda waa Note 20 Ultra iyo Tab S7
Shaashadda cagaaran ayaa markale dhibaato ku ah Samsung, markan moodooyinka 'Note 20 Ultra' iyo 'Galaxy Tab S7'
Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max ee tijaabada iska caabinta: Gorilla Glass Victus ayaa soo saareysa laabta [+ Video]
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, oo la socota Corning Gorilla Glass Victus, ayaa ka fiicnaan doonta iPhone 11 Pro Max tijaabada iska caabinta dhibicda.
Galaxy Note 9 iyo Galaxy S9 ayaa loo cusbooneysiin doonaa One UI 2.5
Samsung waxay si rasmi ah u xaqiijisay in hal ku xigga One UI, lambarka 2.5, sidoo kale laga heli doono Galaxy S9 iyo Note 9.
Xitaa OnePlus Nord ka raqiisan oo leh Snapdragon 460? Tani waa waxa imaan lahaa sanadka soo socda
Sida laga soo xigtay xogo dhowaan, OnePlus ayaa soo saari doona casriga cusub ee Nord wax yar ka dib Snapdragon 460
Guddi 90 Hz ah oo loo yaqaan 'Pixel 5' iyo 'Snapdragon 765G' oo loogu talagalay Pixel 4a 5G cusub, ayaa ah xogtii ugu dambaysay
Waxaa soo ifbaxay daadad cusub oo soo jeedinaya / xaqiijinaya qaar ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee Google ee soo socda Pixel 5 iyo Pixel 4a 5G.
Samsung waxay soo bandhigeysaa taleefan casri ah oo jaban oo qaali ah oo la jaro kaasoo noqon kara nooca Lite ee Galaxy Z Fold2
Waxaa jira warar cusub oo hareeraha ka taagan oo sheegaya in Kuuriyada Koofureed ay dhowaan soo bandhigi doonto taleefan casri ah oo laallaabi karo oo raqiis noqon doona.
Sony Xperia 1 II waxaa lagu dhawaaqay 12 GB oo RAM ah oo daabacaad kooban
Sony ayaa kaga dhawaaqday Japan daabacaad cusub oo ah Xperia 1 II oo leh astaamo ka wanaagsan xagga RAM iyo kaydinta. Ogow wax walba oo isaga ku saabsan.
Sida loo tirtiro barnaamijyo dhowr ah isla mar isla markaaba leh furaha taleefanka Samsung
Samsung gudaheeda waxaa suurtagal ah in laga tirtiro dhowr codsi isla waqtigaas iyada oo ay ugu mahadcelineyso soosaaraha ay ku dartay shirkadda South Korea
Eeg waxa ZTE ee Axon A20 5G u eg yahay, taleefanka kamaradda ugu horreeya ee aan la arki karin ee adduunka lagu arko! [+ Muuqaal]
ZTE wuxuu bilaabi doonaa Axon A20 5G bisha Sebtember 1. Kahor intaysan taasi dhicin, wuxuu shaaca ka qaaday sida terminalku u egyahay muuqaal cusub.
Pixel Buds waxay helayaan astaamo cusub si loo hagaajiyo khibradaha isticmaalaha
Laga soo bilaabo bishii Luulyo ee la soo dhaafay, sameecadaha dhagaha ee Google 'True Wireless (wireless)', Pixel Buds, ayaa hadda laga heli karaa ...
LG K31 waa taleefan casri ah oo raqiis ah oo leh laba kamaradood iyo muuqaal HD + ah
LG K31 waa taleefan casri ah oo waxqabadkiisu hooseeyo oo lagu soo saaray Android 10 iyo Chipset-ka Mediatek ee Helio P22.
Google Pixel 5 iyo Pixel 4a 5G waxay horey u leeyihiin taariikh cusub oo la sii daayay
Qashin-qaade ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka si uu u shaandheeyo taariikhda cusub ee la sii deynayo ee xigta Google Pixel 5.
Isticmaalayaashu waxay bilaabaan inay soo sheegaan dhibaatooyinka kamaradaha Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung waxay ogaatay in moodooyinka qaar ay dhibaato kamarado ka haysato Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta.
BlackBerry wuxuu ku laaban doonaa suuqa taleefanka 2021
2021-ka mid ka mid ah soo saarayaasha taleefannada casriga ah ee tobanka sano ee ugu horreeya sannadihii 2000, ayaa mar kale suuqa ku soo laaban doona.
Telefoonada casriga ah ee Huawei ayaa sii wadi doona inay helaan casriyeynta sida ay soo saaraha soo saartay
In kasta oo ay dhammaatay kordhinta diidmada veto ee dowladda Mareykanka ee shirkadda Huawei, soo saaraha wuxuu xaqiijinayaa in boosteejooyinkooda ay sii socon doonaan.
Samsung waxay iibisaa dhammaan Galaxy Tab S7 si horay loogu dalbado hal maalin
Sharad xiiso leh oo ay Samsung ku iibineyso dhammaan unugyada Galaxy Tab S7 oo ay ku heli laheyd hal maalin.
ZTE wuxuu kululeeyaa IFA 2020: wuxuu soo bandhigi doonaa taleefan casri ah oo leh kamarad shaashadda ka hooseysa
ZTE wuxuu kamid noqon doonaa halyeeyada weyn ee IFA 2020. Sababta? Waxay soo bandhigayaan taleefanka ugu horreeya shaashadda shaashadda hoose.
5G-ga soo socda ee leh 120 Hz shaashadda wuxuu noqon doonaa Realme X7 oo waxay horey u leedahay taariiq bilow ah
Realme ayaa ku dhawaaqday taariikhda la sii deyn doono taleefanka casriga ah ee 5G ee soo socda iyadoo la soo bandhigayo 120Hz, taas oo ah Realme X7.
Samsung waxay dhiseysaa processor cusub oo IBM ah oo loogu talagalay 7nn server
Samsung ayaa mas'uul ka noqon doonta soo saarista processor-ka cusub ee IBM ee loogu talagalay 7 nn server, taas oo dhabar jab weyn ku ah TSMC
Samsung One UI 2.5 hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku isticmaasho Android 10 dhaqdhaqaaqyada tilmaanta ee wax-soo-saarka saddexaad
Galaxy Note20, Note20 Ultra iyo Z Flip 5G ayaa hadda u adeegsan kara tilmaamaha hagitaanka ee ONE Ui 2.5 ee bilaabayaasha saddexaad.
Samsung Galaxy S20 Fan Edition ayaa ka muuqata tarjumaadaha ugu horreeya
Samsung Galaxy S20 Fan Edition wuxuu soo bandhigayaa faahfaahinta ugu horreysa iyada oo ay ugu mahadcelinayaan kuwa soo saaray, waxay noqon doontaa nooc dhaqaale oo ka mid ah taxanaha S20.
Galaxy Note 20 Ultra waxaa lagu soo rogay tijaabooyin adag oo adkaysi iyo adkeysi ah JerryRigEverything [+ Video]
Samsung Galaxy Note 20 Ultra ayaa maray JerryRigEverything's adkeysi adag iyo tijaabinta adkeysiga - waana badbaaday!
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo adeegsado kalkuleytka Samsung qaabka ALLAH ama aad gebi ahaanba u tahay sayid ...
Galaxy Note 20 cusub, Tab S7 + iyo Z Fold 2 ayaa hadda la jaan qaadaya shirkadda Netflix ee HDR
Meelaha ugu dambeeya ee laga helo shahaadada HDR ee Netflix waa noocyada cusub ee 'Note 20', Z Fold 2 iyo Tab S7 + tablet
Asus Zenfone 7 waxaa la soo bandhigi doonaa Ogosto 26
Asus wuxuu soo bandhigi doonaa Zenfone 26 cusub Ogosto 7, oo ah taleefan casri ah oo loo arko inuu yahay kan ugu sareeya khadka kaas oo aan ognahay faahfaahinta qaar.
OnePlus 8 iyo 8 Pro waxay helayaan boogta amniga ee Ogosto oo leh horumarin kala duwan
Cusbooneysiin cusub oo softiweer ah ayaa u timid OnePlus 8 iyo 8 Pro. Waxay ku dareysaa horumarinno kala duwan iyo hagaajinta cilladaha.
Samsung waxay taageeri doontaa cusbooneysiinta Android muddo 3 sano ah Galaxy S, Xusuusin, Foldable, taxane iyo kiniinno
Mobiles-ka Samsung ee Samsung ayaa la taageeri doonaa muddo 3 sano ah waxayna soo bandhigi doonaan khibrad guud si markasta taleefanka gacanta looga dhigo mid casriyeysan.
Dimensity 800U waa Mediatek's 5G chipset cusub ee mobilada dhexdhexaadka ah
Mediatek waxay soo saartay Dimensity 800U, Chipset-keeda cusub ee sideed-core processor ah oo ay kujiraan 5G isla markaana loogu talagalay bartamaha.
Telefoonada casriga ah ee Huawei oo leh adeegyada Google ayaa joojin doona helitaanka wararka cusub
Dhibaatada ugu dambeysa ee ay wajaheyso Huawei ayaa ah inaysan dib dambe u cusbooneysiin karin guntiyada Google ka dib marka kordhinta heshiiska uu dhammaado
IQOO 5 iyo 5 Pro waa labada taleefannada casriga ah ee cusub oo wata 120 W oo degdeg ah, 120 Hz iyo Snapdragon 865.
Galaxy M31s cusub ayaa laga heli doonaa Yurub
Taleefanka casriga ah ee Samsung ay ka hirgalisay dalka Hindiya ayaa ugu dambayntiina sidoo kale iman doona Yurub wuxuuna ku samayn doonaa qiimo ka badan midka lagu tartamo
Cubot C30 oo leh 8GB RAM iyo afar kamaradood ayaa halkan yaal
Ma waxaad raadineysaa mobiil raqiis ah oo leh 4 kaamiro, shaashad weyn iyo 8GB oo RAM ah? Soo hel Cubot C30, oo ah taleefan qiimo aad u qiimo badan leh
Sida si buuxda loogu qaabeeyo Xiaomi ama Redmi adiga oo aan lahayn barnaamijyo dhinac saddexaad ah
Waxaan ku tuseynaa barnaamijka asalka ah Mawduucyada Xiaomi iyo Redmi casriga ah. Tan waxaan ula jaanqaadi karnaa iyaga si fiican.
Hadda waa suurtogal in wax laga beddelo fiidyowyada 4K ee 60 fps leh barnaamijka OnePlus Gallery oo ay ugu mahadcelinayaan cusbooneysiintooda cusub
Barnaamijka OnePlus Gallery wuxuu ugu dambeyntii helay cusbooneysiin cusub oo ku daraya fiidiyowga 4K ee 60fps iyo wax ka badan.
Taleefoonnada cusub ee Xiaomi, Mi 10 Ultra iyo Redmi K30 Ultra, laguma suuq geyn doono meel ka baxsan Shiinaha.
Moto E7 ayaa dhowaan imaan doona isaga oo wata batari 5.000 Mah: qiimahiisa iyo faahfaahin dheeri ah ayaa la muujiyay
Awoodda batteriga ee Motorola Moto E7 ayaa la daadiyay. Qeexitaankiisa iyo astaamaha ugu waaweyn sidoo kale horey ayaa loo yaqaanay.
Chipsets-ka loo yaqaan 'Qualcomm Snapdragon DSP' wuxuu leeyahay cillad amni oo khatar ah
Check Point Research waxay ku taal cillad weyn oo khatar ah xagga amniga processor-ka Qualcomm ee Snapdragon DSP,
Kala duwanaanshaha Galaxy ee Samsung wuxuu la kulmi karaa masiir la mid ah midka 'S' iyo 'Note' oo wuxuu heli karaa saddex sano oo cusbooneysiin ah Android
Qeexitaanka Microsoft Surface Duo, Qiimaha, iyo Helitaanka
Shirkadda Microsoft ayaa si rasmi ah u shaacisay qiimaha ugu dambeeya iyo taariikhda la sii deyn doono shirkadda Microsoft Duo, oo ah nooca casriga ah ee "laab laaban".
DxOMark waxay daabacday dib u eegiskeedii ugu dambeeyay ee kamaradda, kaas oo ku saabsan isku dhafka 'Xiaomi's Mi 10 Ultra', mobilada ugu fiican sawirrada.
Vivo S1 Prime waa taleefan cusub oo ay soo saartay shirkadda Shiinaha ee ka howlgasha Burma, waddanka ay markii hore timaaddo.
Moto RAZR 5G taleefanka casriga ah ee isku laaban ayaa durbaba leh taariikh rasmi ah oo la soo bandhigi doono, taas oo la qorsheeyay bisha Sebtember.
Kooxaha Samsung ayaa leh ARM iyo AMD si ay uga adkaadaan Qualcomm
Samsung waxay rabtaa inay dhaafto Qualcomm oo ah shirkada soo saarta hormarinta mobilada waxayna iskaashi la sameysay ARM iyo AMD
Pixel 5 waxaa la xaqiijiyay inuusan aheyn mid heer sare ah
Wararkii ugu dambeeyay ee laxiriira Google Pixel 5, waxay xaqiijinayaan in aysan maamuli doonin Qualcomm's Snapdragon 865
Telefoonkii ugu horreeyay ee kamarad aan la soo bandhigin ayaa diyaar u ah in la soo saaro
Ni Fei, madaxweynaha ZTE, ayaa noo cadeeyay in dhawaan shirkada shiineeska ah ay soo bandhigi doonto taleefankii ugu horeeyay ee casriga ah iyadoo kaamirada shaashada ka hooseysa
Xiaomi Mi 10 Ultra waa taleefankii ugu horreeyay ee wata 120W xawaare sare leh iyo 120x zoom
Xiaomi waxay ku dhawaaqday Mi 10 Ultra cusub, oo ah taleefan heer sare ah oo leh waxqabad sare, waxay muujineysaa heerka cusbooneysiinta ee 120 Hz iyo culeyska 120W.
Redmi K30 Ultra, taleefanka cusub ayaa horey loogu sii daayay shaashadda 120 Hz iyo kamarad pop-up ah
Redmi K30 Pro waa taleefanka casriga ah ee cusub ee suuqa laga bilaabay iyadoo la adeegsanayo shaashad dhan 120 Hz iyo processor-ka Mediatek Dimensity 1000+.
Vivo Y1s: Hoos-u-dhac cusub oo leh Helio P35 iyo Android 10
Vivo Y1s waa taleefan cusub oo shirkaddu soo saartay oo lagu soo bandhigay Kambodiya. Ogow wax walba oo ku saabsan qalabkan cusub.
Huawei Mate X2 wuxuu yeelan doonaa naqshad la mid ah tan Samsung ee Z Fold
Jiilka labaad ee taleefanka gacanta ee isku laaban Huawei ayaa qaadan doona naqshad la mid ah ta Galaxy Z Fold2, oo isku laaban gudaha.
OnePlus Nord wuxuu helayaa cusbooneysiin cusub oo OTA ah: OxygenOS 10.5.4 waxay la timid dhowr horumar
OnePlus Nord wuxuu soo dhaweynayaa cusbooneysiin cusub oo OTA ah oo lagu darayo OxygenOS 10.5.4 oo leh horumarin iyo hagaajin kala duwan.
Huawei Mate 40 wuxuu mar kale u ifayaa kamaradiisa afar geesleyaasha wareegsan iyo qaar ka mid ah qeexitaankiisa muhiimka ah
Bog internet oo laga leeyahay Shiinaha ayaa siidaayay qaar ka mid ah astaamaha waaweyn iyo tilmaamaha farsamo ee Huawei Mate 40.
Kuwani waa 10-ka chipsets ee processor-ka ugu awoodda badan taleefannada gacanta maanta
AnTuTu waxay daaha ka rogtay liis cusub oo ay dhigeyso 10-ka chipset-ka processor-ka casriga ah ee ugu waxqabadka fiican maanta.
120X zoom?: Kaamirada Xiaomi Mi 10 Ultra waxay yeelan doontaa muuqaalkan si loogu wareejiyo Galaxy S20 Ultra
Dhowr sawir iyo sawiro xayeysiis ah oo ka socda Xiaomi ee Mi 10 Ultra ayaa la siidaayay, qalab heer sare ah oo la imaan doona 120X zoom.
Google Pixel 4a cusub ayaa hogaaminaya iibka Amazon iyo Best Buy ee Mareykanka
Si ka duwan sidii loo bilaabay Pixel 3a, Pixel 4a wuxuu noqday kan ugu iibsiga badan Mareykanka, isagoo sare u qaaday qiimeynta iibka.
Xiaomi ayaa xaqiijisay dhammaan liiska taleefannada ku cusbooneysiin doona Android 11 oo leh lakabka MIUI 12 ee bilaha soo socda.
Xiaomi Mi MIX 2S iyo Mi MIX 3 waxay bilaabayaan inay helaan cusboonaysiinta MIUI 12
MIUI 12 OTA oo xasiloon ayaa haatan lagu soo bandhigayaa Shiinaha iyadoo loo marayo Xiaomi Mi MIX 2S iyo Mi MIX 3 ee Shiinaha. Mar dhow ayaa adduunka oo dhan laga bixin lahaa.
Huawei Mate 40 ayaa noqon doona nuuca ugu dambeeya ee adeegsada processor Kirin
Shirkadda Huawei ee soo socota, Mate 40, ayaa noqon doonta taleefankii ugu dambeeyay ee shirkadda Aasiya ee lagu daro processor-ka Kirin ee shirkaddu naqshadeysay
Poco F2 Pro 5G, sanduuq la'aan iyo dareenka ugu horreeya [VIDEO]
Poco F2 Pro 5G, oo ah aalad wax yar ka tagtay nuxurkeeda qiimaha jaban laakiin taasi waxay noo reebtay dareeno arxan daran.
10-ka casriga ah ee ugu waxqabadka fiican July 2020
Heerka AnTuTu wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10ka taleefannada casriga ah ee ugu waxqabadka fiican July 2020. Waxaan kugu tusineynaa halkan!
HTC Wildfire E2 waa la iibinayaa iyada oo aan si rasmi ah loo shaacin
HTC Wildfire E2 ayaa lagu iibinayaa Ruushka si lama filaan ah oo aan la shaacin. Ogow dhammaan astaamaha farsamo oo dhammaystiran.
Redmi 9 Prime waa taleefanka miisaaniyada cusub ee leh hawo dhexdhexaad ah
Xiaomi ayaa Hindiya ka soo saartay taleefan casri ah oo wax-qabadkiisu hooseeyo, waana Redmi 9 Prime, oo ay la socoto Helio G80 chipset.
Samsung Galaxy Note 20 iyo Galaxy Note 20 Ultra waxay helayaan cusbooneysiintoodii ugu horreysay ee software
Samsung Galaxy Note 20 iyo Samsung Galaxy Note 20 Ultra waxay helayaan cusboonaysiinta ugu horraysa intaanay iman. Ka ogow wararka.
Huawei P9 lama ilaawin horeyna wuxuu u leeyahay cusbooneysiin cusub
Huawei P9-ka sare ee khayaaliga ah ayaa dib loo soo nooleeyay iyada oo ay ugu wacan tahay cusbooneysiinta software-ka cusub ee ay hadda helayso.
Hadda waxaad ka ciyaari kartaa PUBG Mobile-ka 90 fps haddii aad leedahay OnePlus
Laga bilaabo maanta illaa Sebtember 6, dhammaan isticmaalayaasha OnePlus hadda waxay ku raaxeysan karaan PUBG Mobile-ka 90 fps.
Oktoobar 8, Pixel 4a 5G iyo Pixel 5 cusub ayaa suuqa soo gali doona
Nooca 5G ee Pixel 4a oo la soo bandhigay Isniintii la soo dhaafay, wuxuu ku dhici karaa suuqa Oktoobar 8, sida laga soo xigtay Google France.
Realme C12 waxay maraysaa shahaadooyin kala duwan oo leh batari 6.000 mAh ah
Realme C12 waxay soo martay afar shahaado oo muujineysa batari muhiim ah oo gaaraya 6.000 mAh oo uu suuqa ku geli doono.
Samsung Galaxy Watch 3 hadda waa rasmi: naqshad iyo astaamo
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Samsung Galaxy Watch 3, Samsung smartwatch cusub oo la tartami doonta Apple Watch 5